Kabarin’Atoa Marc Ravalomanana tao aminy Carlton, 8 Jolay : Ny antoko Tim; Ny Tan-dalàna; Ny paik’ady… | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Faravohitra, 10 Jolay 2017. Fanambarana, Marc Ravalomanana.
Ben’ny tananan’ny Ampefy nisy namono, Randrianarilahy Fidy. Nitsapa alahelo ny antoko Tim. →
Kabarin’Atoa Marc Ravalomanana tao aminy Carlton, 8 Jolay : Ny antoko Tim; Ny Tan-dalàna; Ny paik’ady…
Mitohy hatrany anefa ny antsojay sy ny fingampingana isan-karazany atao amin’ity filoha teo aloha ity. Nogadraina an-kolaka, ohatra, ny tenany rehefa tafaverina teto an-tanindrazana ny taona 2013. Natao ihany koa ireo fomba rehetra tsy hisokafan’ireo orinasany norobaina sy nopotehana nandritra ny alatsinainy mainty ny 26 janoary 2009. Mankalaza ny faha-15 taona nisiany indray ankehitriny ny antoko Tiako I Madagasikara naoriny tamin’ny taona 2002 dia tratran’ny sakantsakana tsotra izao. Fa inona loatra re no antony e ?
Raha tsiahivina ny tantara, tamin’ny alalan’ny fikambanana Tiako Iarivo no nirotsahan’ny kandida Marc Ravalomanana ny taona 1999. Lany ben’ny tanàna ary nitantana ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny tenany nandritra ny 2 taona, 5 volana sy 22 andro. Fampanantenany tamin’izany ny hanova endrika ny renivohitr’i Madagasikara. Niompana tamin’ny fanorenana fotodrafitrasa samihafa ireo asa marobe vitan’ny Ben’ny tanànan’i Tiako Iarivo Marc Ravalomanana. Nisongadina indrindra tamin’ireny ny fanamboaran-dalana toy ny lalana Mohamed V manoloana ny kolejy Masina Misely Anosy na koa ny fanitarana ny lalana eny Andohatapenaka notohanan’ny AFD (Agence Française de Développement) sy ny Vondrona eoropeanina. Niova ny fomba fiasa teo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra nanomboka teo ary niha hentitra kokoa ny fanaraha-maso. Hatreto aloha dia tamin’io vanim-potoana (1999-2001) nitantanan’i Marc Ravalomanana ny CUA no tena nisy nahatsapa hoe niasa mafy ary tena nahavita zavatra araka ny tanjona napetraka ny tao amin’ny kaominina.
Tiako I Madagasikara matanjaka
Lany ho filohan’ny Repoblika tamin’ny alalan’ny fikambanana Tiako I Madagasikara i Marc Ravalomanana ny taona 2002 taorian’ny fifanolanana naharitra enim-bolana tamin’ny kandidam-panjakana Didier Ratsiraka. Niofo ny fikambanana ka laharam-pahamehan’ny antoko politika Tiako I Madagasikara (TIM) ny fampandrosoana haingana ny firenena miaraka amin’ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Politika novoizin’ny TIM ny fanavaozana ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ny ady amin’ny fahantrana, ny fanamboaran-dalana. Nofoanana ireo Faritany 6 ka nasolo azy ireo Faritra 22. Najoro ihany koa ireo rafitra isan-karazany toy ny Bianco natao iadiana amin’ny kolikoly, ny SAMIFIN hifehezana ny famotsiam-bola na koa ny EDBM ho fanampiana ny sehatry ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Niroborobo ireo programa sy tetikasa fampandrosoana fiaraha-miombon’antoka tamin’ireo firenena vahiny samihafa tahaka ny PGDI, ny MCA na koa ny AGOA. Nampiavaka ny fitondrana Ravalomanana moa ny politika fandaharanasa fampandrosoana dia ny MAP (Madagasikara Am-Perinasa) izany.
Diplaomasia sy famatsiam-bola
Samy miaiky ny rehetra fa kapoakan’i Dadavalo tokoa ny fifampiresahana sy fifampiraharahana. Mahafantatra tsara ny fomba fiasan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena izy ary mahay miresaka tsara amin’izy ireo. Tena sahy nijoro niaro ny tombontsoan’i Madagasikara sy ny Malagasy koa anefa i Marc Ravalomanana ary tsy nanaiky mihitsy izany hoe ny vahiny no hanjakazaka sy hanao izay tiany eto. Fiaraha-miasa no atao fa tsy fanambakana, hoy Ravalomanana ary fantatry ny vahiny tsara izay filôzôfiany izay ary nohajain’izy ireo. Natanjaka ny diplaomasia Malagasy tamin’ny nitondran-dRavalomanana ary efa natomboka tamin’izany ilay hoe : “diplaomasia ekonomika” ka nampiasaina hitady mpiara-miasa sy mpamatsy vola ireo masoivohon’i Madagasikara tany ivelany fa tsy hoe mpanasonia taratasy sy fangatahana fotsiny. Hatreto aloha dia tamin’ny fitondrana Ravalomanana no nanana tahiry vola vahiny betsaka indrindra ny banky foiben’i Madagasikara (2miliara dolara) ; ary ho an’ny governemanta dia ny asa atao indray no tsy ampy fa ny famatsiam-bola dia nitobaka, io no nahatonga ilay resaka hoe : “ny vola misy fa ny handaniana azy no manahirana”. Tena nisy ny minisitera tsy nahalany ny ampaham-bola efa natokana ho azy. Efa nananika ny 3 miliara dolara ny tetibolan’ny fanjakana ny taona 2007 sy 2008.
Mahalala, mahay, mahavita
Fa ny tena nampiavaka an’i Marc Ravalomanana sy ny antoko TIM notarihany dia ny fampiharana ny haitarika (leadership) amin’izay zavatra rehetra atao; misy ny teknika ampiasaina hampazoto miasa ny olona sy haha tompon’andraikitra azy kokoa ary haha matihanina azy. Io ihany no hahazoana vokatra tsara araka ny drafitra efa napetraka. Fanofanana goavana momba ny “leadership” no natao teto Madagasikara tamin’ny alalan’ny NLIM (National Leadership Institute of Madagascar) ary nisy ny mpiara-miasa matanjaka avy any amin’ny oniversiten’i Harvard Etazonia sy ny Franklin Covey izay lohalarana eran-tany amin’ny fanofanana sy fampianarana momba ny “leadership”. Tsy ampy ny mahalala fotsiny ny olana fa mila mahay mamaha izany amina paikady mazava no sady mahavita manatanteraka ny asa hamahana azy ianao, hoy i Marc Ravalomanana. Ary dia izay foto-kevitra izay no nampitainy hatrany tamin’ireo rehetra niara-niasa sy mbola miara-miasa aminy ka nanomezana azy ny solon’anarana hoe : “Ramose”.
Tsy tongatonga ho azy noho izany ny mbola maha matanjaka ny antoko Tiako I Madagasikara 15 taona aty aoriana, na dia efa maro aza ny sedra sy olana niainany. Mazava ny foto-kevitra ijoroana dia ny fampandrosoana ny firenena, fanasoavana ny Malagasy, fametrahana an’i Madagasikara amin’ny toerana sahaza azy. Sahy ary mbola sahy hijoro ho an’i Gasikara hatrany i Dadavalo miaraka amin’ny fianakaviamben’ny Tiako I Madagasikara. Mitohy hatrany ny lalana.
Ramano F. TiaTanindrazana.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Carlton Tiako i Madagasikara, Marc Ravalomanana Tim, Ravalomanana Carlton. Ajoutez ce permalien à vos favoris.